Isipho Sokuphuza Amanzi Emanzi Amasha Amasha Iqoqo Elimhlophe Lama-Hot Water China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ibhodlela lemanzi elisha elimnandi,Isipho Sokuphuza Amanzi Amanzi Amanzi,I-Silicone Bag Water Hot
Home > Imikhiqizo > Izinsiza Zasekhaya > Isipho Sokuphuza Amanzi Emanzi Amasha Amasha Iqoqo Elimhlophe Lama-Hot Water
I-Model No.: W5
Certification: SGS, BS, Other
Color: Quartz Powde, Cyan, Red, Light Gray
Isipho Sesikebhe Sokuphuza Amanzi Amanzi Amanzi Amasha - I-Silicone Hot Water Bag
Umkhiqizi wamabhodlela wamanzi ashisayo, izinga eliphezulu, isitolo sefektri, intengo ephansi, i-OEM / i-ODM eyamukelekile, ngokwezifiso isitayela, ngokwezifiso umbala, ngokwenza ngokwezifiso log, ngokwezifiso iphakheji.
Isikhumba samanzi eshisayo samanzi ashisayo, uvumelane ngokujulile ukuvimbela ukuvuza, ukwenqaba ukuvuza imiphumo.
I-grade grade abicah + PP impahla, ukumelana nokucindezela, Ukuhlala njalo.
Ungatshiswa emgodini we-microwave, uyibeke ku-microwave imizuzu emithathu elula futhi esheshayo.
Isikhwama samanzi ashisayo esiphuthumayo sokuphumula ubuhlungu, kalula sibe isikhwama samanzi e-ice, ibhodlela lamanzi ashisayo lingasetshenziselwa ukupholisa umzimba nokucindezeleka okubandayo.
Ibhodlela lamanzi lika-Silicon
Ibhodlela lemanzi elisha elimnandi Isipho Sokuphuza Amanzi Amanzi Amanzi I-Silicone Bag Water Hot Ibhodlela lamanzi elingahlambuluki elincane Ibhodlela leManzi elisekelwe Ibhodlela leManzi eliPhezulu elinesihlungi Ibhodlela leManzi lokuhamba Ibhodlela lamanzi lika-Silicon